Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Boeing họpụtara onye isi nchịkwa ego ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Brian West, onye na-ahụ maka ego ogologo oge na onye isi azụmaahịa nwere ahụmịhe n'ofe ikuku, nrụpụta, akụrụngwa, ọrụ ozi ụwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, akpọrọ Boeing CFO ọhụrụ.
West ga-eduzi akụkụ niile nke atụmatụ ego Boeing, arụmọrụ, mkpesa na atụmatụ azụmaahịa ogologo oge, yana mmekọrịta ndị ọchụnta ego, ego, njikwa na ọrụ nyocha.
West ga -akọrọ onye isi Boeing na onye isi oche David Calhoun ma rụọ ọrụ na kansụl Executive nke ụlọ ọrụ ahụ.
West nọchiri Greg Smith, onye kwupụtara na mbụ atụmatụ ịla ezumike nka, dị irè na mbido July.
The Companylọ ọrụ Boeing taa kpọrọ Brian West ka ọ bụrụ osote onye isi ụlọ ọrụ na onye isi ego na -amalite na August 27, 2021.
N'ime ọrụ a, West ga-eduzi akụkụ niile nke atụmatụ ego Boeing, arụmọrụ, mkpesa na atụmatụ azụmaahịa ogologo oge, yana mmekọrịta ndị ọchụnta ego, ụlọ akụ, onye na-ahụ maka njikwa na nyocha. West ga -eleba anya na mgbanwe mgbanwe azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ma nwee nnukwu ọrụ maka ụlọ ọrụ nkwado ego zuru ụwa ọnụ, Boeing Capital Corporation. Ọ ga -agakwuru onye isi Boeing na onye isi oche David Calhoun wee rụọ ọrụ na kansụl Executive nke ụlọ ọrụ ahụ.
Calhoun kwuru, "Brian bụ onye isi ga-arụ ọrụ dị ka Boeing na-esote CFO nyere nnukwu njikwa ego ya na ahụmịhe atụmatụ atụmatụ ogologo oge na ụlọ ọrụ dị mgbagwoju anya n'ofe ikuku, n'ichepụta na ọrụ." “Enweela m obi ụtọ isoro Brian na -arụkọ ọrụ na mbụ, ọ bụkwa onye ndu pụrụ iche nke oke ọrụ ya na ntinye aka nke nghọta na ndị nwere oke ga -aga n'ihu mbọ anyị ka anyị na -aga n'ihu na -elekwasị anya na nchekwa na ịdị mma, melite arụmọrụ anyị na ịgbanwe ụlọ ọrụ anyị. ọdịnihu. ”
West sonyere Boeing na -eso ọrụ na -aga nke ọma na iche iche na nnukwu ọrụ ego na arụ ọrụ nke metụtara ọtụtụ ọrụ, gụnyere ikuku, nrụpụta, akụrụngwa, ahụike, ọrụ ozi ụwa niile, njikwa ego na njikwa ihe egwu. Ọ rụọla ọrụ dị ka onye isi ego Refinitiv kemgbe 2018, ọ bụkwabu CFO na onye isi osote onye isi nke Operations maka Oscar Health Insurance na CFO na COO nke Nielsen. Tupu Nielsen, West nọrọ afọ 16 na General Electric, ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka CFO nke GE Aviation na CFO nke GE Engine Services. Ọnọdụ ndị isi ego ya ọzọ na azụmaahịa GE gụnyere plastik, njem na ume.
West bụ onye otu ntọala nke ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ nke sitere na Connecticut nke ebumnuche ya bụ ịkwadebe ọgbọ na-esote nke ndị isi ụmụ nwanyị dị iche iche nwere nka, obodo na njikọ ka ha wee mee nke ọma n'ụwa. Ọ bụbu onye otu bọọdụ nke Future 5, otu na-enyere ụmụ akwụkwọ aka na Stamford, CT aka inweta ike ha niile.
West nwere akara ugo mmụta bachelor na ego site na kọleji Siena yana nke Nna -ukwu na nchịkwa azụmahịa site na Businesslọ Akwụkwọ Azụmaahịa Columbia.
West nọchiri Greg Smith, onye kwupụtara na mbụ atụmatụ ịla ezumike nka, dị irè na mbido July. Companylọ ọrụ ahụ akpọrọ Dave Dohnalek, onye isi oche Boeing ugbu a na onye na -echekwa ego, ka ọ bụrụ ọrụ nke CFO nwa oge ruo mgbe West sonyere ụlọ ọrụ na ngwụsị August.
Calhoun kwuru, "Achọrọ m ikele Greg ọzọ maka onyinye pụrụ iche o nyere ndị ọrụ anyị, ndị ahịa, obodo na ụlọ ọrụ anyị n'ime ihe karịrị afọ iri atọ ya na Boeing jere ozi." "Achọrọ m ikele Dave maka iburu onye isi nwa oge nke nzukọ ego anyị. N'ime iri afọ nke ahụmịhe onye isi nchịkwa na Boeing n'ofe akụ, mmekọrịta ndị ọchụnta ego, atụmatụ ego na ihe ndị ọzọ, Dave bụ onye ndu a na -akwanyere ùgwù nke ukwuu nke ga -ewetara nzukọ ego anyị ndụmọdụ ziri ezi na nke ziri ezi n'oge mgbanwe a. "